Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » CNN Fitiavana Vaovao ho an'ny Samsung: Ary mandoa izany!
CNN sy Samsung mpiara-miombon'antoka amin'ny fanentanana manerantany mikaroka ny herin'ny teknolojia
CNN International Commercial (CNNIC) dia niara-niasa tamin'ny Samsung Electronics (Samsung) ho an'ny fanentanana dokam-barotra izay manasongadina ny herin'ny teknolojia hananganana hoavy tsara kokoa sy hanampiana ny olona handresy ireo fanamby amin'ny alàlan'ny fanavaozana teknolojia.
Amin'ny alàlan'ny andian-tsarimihetsika marika 'Better Tech For All' sy ny fampifanarahana ny marika amin'ny famoahan-dahatsoratra 'Tech for Good', ny fanentanana dia hampifandray an'i Samsung amin'ny mpihaino manerantany CNN hanehoana ny fomba nampiasan'ny olona ny teknolojia vaovao mba hanomezana hery ny tenany sy ny fiaraha-monina misy azy.
Better Tech ho an'ny rehetra', andiana votoaty misy marika novokarin'ny studio marika manerantany nahazo loka CNNIC mamorona, dia manaraka lohahevitra iraisana amin'ny fanavaozana miavaka izay ahafahan'ny olona miroborobo sy mandresy ireo fanamby amin'ny alalan'ny teknolojia. Ny sarimihetsika voalohany 'Voasonia am-pitiavana' manasongadina an'i David Cowan, mpandika teny amin'ny tenin'ny tanana marenina maneho hevitra izay nanampy ny fanambaran'ny fanjakana ofisialy avy any Georgia any Etazonia ary efa ho telopolo taona no nandika teny ho an'ny mpihaino marenina. Nambarany fa ny teknolojia no nahatonga ny fampahalalam-baovao ho mora azo kokoa sy nanatsara ny fiainan'ny fiaraha-monina marenina. Ao anatin'ny fanoloran-tenan'ny CNNIC amin'ny faharetana, nanatevin-daharana ny hetsika Ad Net Zero an'ny Advertising Association ny Create ary ity no sarimihetsika voalohany navoakan'ny Create mba hamokarana karbônina tsy miandany amin'ny fampiasana ny kajy karbônina Albert mba hampihenana ny dian-tongotra karbona. Jereo ity sary ao ambadiky ny sehatra raha te hianatra bebe kokoa momba ny fomba nitondran'ireo ekipa mpamokatra eran'izao tontolo izao ity sarimihetsika manainga fanahy ity.
n fanampiny, ny 'Tech for Good' andiany dia natomboka nandritra ny taona faharoa nisesy, miaraka amin'ny Samsung. Nampiantranoin'ny CNN vatofantsika sy mpanao gazety Kristy Lu Stout, vanim-potoana faharoa an'ny 'Tech for Good' natomboka tamin'ny Jolay tamin'ity taona ity ary ahitana fizarana efatra maharitra 30 minitra mandeha hatramin'ny Novambra manerana ny fahitalavitra CNN International, miaraka amin'ny votoaty fanampiny amin'ny sehatra nomerika sy sosialy, mikaroka ny fomba anampian'ny teknolojia na ny olona sy ny fiarahamonina midadasika amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanabeazana ka hatramin'ny faharetana.
"Tombontsoa foana ny miara-miasa amin'ny mpitarika indostrialy toa an'i Samsung ho an'ny hetsika miampita sehatra manaitra izay mampiseho ny herin'ny teknolojia," hoy izy. Rob Bradley, filoha lefitra zokiolona, ​​CNN International Commercial. "Ny fampahalalam-baovao momba ny kalitao miaraka amin'ny fampiasana ny angon-drakitra sy ny analyse dia manome vahaolana vaovao izay hampifandray ireo marika amin'ny mpihaino lehibe manerana izao tontolo izao. Manantena izahay fa ity fiaraha-miasa ity dia manome aingam-panahy ny mpihaino CNN hieritreritra ny ho avy sy hanatsara ny fiainan'ny hafa amin'ny famoronana teknolojia ho amin'ny tsara.